टप नेपाली जोक्स – Top Nepali Jokes – Page2– MeroJilla.com
यौन सम्पर्कबाटै ठिक हुन्छ केही रोग Sunday, October 22nd, 2017
काठमाडौं । वैज्ञानिकहरुले यौनसम्पर्क गर्दा टाउकोको दुखाई तुरुन्तै ठिक हुने नयाँ तथ्य पत्ता लगाएका छन् । उनीहरुले सेक्सलाई टाउको दुखाईको अचूक औषधि भनेका छन् । आमरुपमा सेक्सबाट यति सुख मिल्छ कि शरीर र मनको थकान मेटाउछ । कसैको नजिक हुनु, उसलाई छुनु, प्यारले उसको शरीरको गहिराइमा आफ्नो एकान्त शेयर गर्नुले एक अलग्गै खालको नशा दिन्छ । र यसलाई सेक्सको जादु भनिन्छ । यति मात्रै..
लिङ्ग २४ घण्टामा ११ चोटी उत्तेजित,पुरुषको लिङ्गको बारेमा १४ रोचक तथ्य Tuesday, October 17th, 2017
‘लिङ्ग’को बारेमा कुरा गर्दा धेरैजना अप्ठ्यारो मान्ने गर्छन्, अझ कतिले यस्ता व्यक्तिहरूलाई समाज र संस्कृतिको कलङ्कको रूपमा हेर्दछन्। तर एकचोटि गहिरिएर सोच्नुहोस् त, पुरुषको लिङ्ग र महिलाको योनी बिना के मानवजातीको अस्तित्व सम्भव छ? यध्यपी, सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो कि, भित्रभित्रै हामी आफ्नो अनौठो अनि रोचक गुप्ताङ्गको बारेमा जिज्ञासा पोख्ने गर्छौँ। त्यसैले, कुनै ढिला नगरी..
मसाज सेन्टरमा यौनधन्दाः सेक्स गर्दै गरेका ४० युवायुवती पक्राउ (फोटो फिचर) Thursday, October 12th, 2017
एजेन्सी,६ असोज । प्रहरीले भारतको एक मसाज तथा स्पा सेन्टरमा छापा मारेर ४० जना युवायुवतीलाई यौनकार्यमा लिप्त भएको अवस्थामा पक्राउ गरेको छ । मसाजको नाममा यौनधन्दा चलिरहेको सूचनाको आधारमा प्रहरीले छापा मार्दा ४० जना युवायुवती यौनकार्यमा लिप्त भएको अवस्थामा पक्राउ गरिएको हो । पक्राउ परेकाहरु सबैजना हाइप्रोफाइल खानदान रहेका भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । यहाँ मसाजको..
श्रीमानले ‘अप्राकृतिक यौनसम्पर्क’ गर्न थालेपछि म घर छोडेर जान बाध्य भए… Wednesday, October 11th, 2017
२५ असोज । ओमानको मस्कटमा २६ वर्षीया एक महिला श्रीमानको अत्याचार सहन नसकेर घरबाटै भागेकी छिन् ।जोगेश्वरी नामकी महिला भागेर भारतको मुम्बई पुगेकी छिन् ।मुम्बईमा उनको माइती घर छ तर, उनी माइतीघर नगएर सिधै अम्बोली पुलिस स्टेशनमा आफ्ना श्रीमान अमजद जिवानीविरुद्ध उजुरी दर्ता गराएकी छिन् उनले आफ्नो उजुरीमा श्रीमानले दिनदिनै बलात्कार (इच्छा नहुँदा नहुँदै जबरजस्ती यौनसम्पर्क)..
स्तन ठुलो बनाउने यस्तो घरेलु उपाय Monday, October 9th, 2017
तँपाई आफ्नो स्तनको आकार सानो भएर चिन्तित हुनुहुन्छ भने अब चिन्ता लिनु पर्दैन । स्तनको बृद्धि विकास नहुँदा कयौ महिलाहरू चिन्तित हुने गर्छन् । कोही स्तनको सानो आकार देखेर आफ्नो व्यक्तित्व बृद्धिमा समेत कमजोरी रहेको महशुस गर्छन् भने कोही शारीरिक सुन्दरतामा कमी आएको ठान्छन् । धैरेलाई थाहा नहुन सक्छ स्तन बृद्धिका लागि घ्यूकुमारी अचुक उपाय हुन सक्छ ।प्रायः मान्छे चाँया..
छ्या भिनाजु के गर्नुभएको यस्तो? म निथ्रुक्कै भिजिसकेकी छु, भो…. Sunday, October 8th, 2017
२२ असोज । हैन लोग्ने मान्छेको जात पनि कस्तो हुँदो र’ छ तरुनी हेर्दै मख्ख पर्ने । तरुनी भनेपछि धन देख्दा महादेवको तीन नेत्र भनेजस्तै हुन्छ । मन पनि कस्तो हो कुन्नि ? बाटो हिँड्दा होस् कि कुनै यात्रामा होस्, यी मर्दहरू केवल तरुनीकै चक्करमा हुन्छन् । काम कुरा एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर । हैन, घरमा स्वास्नी नहुनेले त यताउता आँखा लगायो, लगायो, स्वास्नी हुनेले चाहिँ के खोजेका हुन्..
पुरुषहरूले छाती देखाएर हिँड्न मिल्ने तर महिलाले किन नमिल्ने ?
२२ असोज । प्रत्येक वर्षको अगस्ट महिनामा सञ्चालन हुने गो टपलेस डेमा यस वर्ष पनि पुरानै माग दोहोरिएको छ । गत शनिबार आफ्नो १० औं वार्षिकोत्सव मनाउने क्रममा पुरुषहरूले छाती देखाएर हिँड्न मिल्ने तर महिलाले त्यो अधिकार किन नपाउने भन्ने प्रश्नलाई उनीहरूले दोहोर्‍याए । नेभाडास्थित गो टपलेस संस्थाले आयोजना गर्ने यो प्रदर्शनको उद्देश्य अमेरिकाका नयाँ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प..
यौन सम्पर्क नगरि वा हस्तमैथुन नगरि वीर्य थुपार्नु भएको भए तपाई ठूलो समस्यामा… Friday, October 6th, 2017
२० असोज । के तपाईंलाई पिसाब छिटोछिटो लाग्ने, पोल्ने, पिसाब गर्दा धारा छुटने, मसिनो हुने धारा छुट्दा छरिएर जाने, अण्डकोष सुनिने, गनाउने, नाइटोमुनि दुख्ने, वीर्य खस्दा पोल्नेजस्ता समस्या छ ? माथि मध्येका कुनै पनि लक्षण जुनसुकै उमेरका पुरुषमा देखिएको छ भने एकपल्ट सोच्नैपर्छ कतै तपाईंलाई प्रोस्टेट ग्रन्थी (पुरुष वा प्रजनन ग्रन्थी) सम्बन्धी सङ्क्रमण त भएको छैन ? समयमै उपचार गरे..
यौन सम्पर्क कसरी गर्ने ? यस्तो छ सन्नी लियोनीको टिप्स Thursday, October 5th, 2017
मुम्बई १९ असोज । पूर्व पोर्नस्टार तथा बलिउड अभिनेत्री सन्नी लियोनीले यौन सम्बन्धबारे आफ्नो धारणा स्पष्ट पारेकी छिन् । हिन्दुस्तान टाइम्सका अनुसार, पोर्नस्टार भएको नाताले सन्नीलाई सोधिएको थियो कि शारीरिक सम्बन्धका बारेमा के सोच्छिन् के उनी सेक्सलाई सही मान्छिन् ? यी प्रश्नको जवाफ दिँदै सन्नीले भनेकी छिन्– यदी कुनै युवतीलाई बच्चा चाहिएको छैन् भने उनलाई औषधिको प्रयोग गर्न..
आफ्नै साथीको श्रीमानसँगको त्यो रात, अझै मलाई सम्झिदा पनि लाज लाग्छ ,फोटाहरु यसरी वाहिरिए छन Sunday, October 1st, 2017
१५ असोज । आजभोली अफिस जान भने पछि हुरुक्कै हुन्छु। कहिले पुगुँ र त्यो रिसेप्सनको कुर्सीमा गएर थच्च बसुँ जस्तो लाग्छ। मानौं अचेल त्यो रिसेप्सनको कुर्सीमा आधुनिक चुम्बक छ ! अनि पो त्यसले मलाइ तानी रहन्छ। नत्र किन म अफिस भने पछि मरिहत्ते गरेर दौडन्छु त ? जति काम गरे पनि तलब भत्ता जस्ताको तस्तै ! तर पनि म भित्र भने अचेल अचम्मको जाँगर खुबै चलेर आँउछ। पहिले त अफिस भने पछि वाक्कदिक्क..
एक रातमा कति पटक सम्म सेक्स गर्न सक्छन केटीहरु ? Tuesday, September 26th, 2017
१० असाेज । यौनको मामलामा जानकार तथा विज्ञहहरुले गरेको अनुमानलाई हेर्ने हो भने एक वयस्क पुरुषले एक रातमा कति पटक सम्म सेक्स गर्न सक्छन् भन्ने अझै पनि एकिन भन्न सकिन्न । तर एक स्वस्थ तथा वयस्क पुरुषले यौनको चरम सुखानुभोगको आधार मा उसको यौनको मात्रा तथा तथा गन्ति गर्न सकिन्छ । पुरुषहरु मदिरा सेवन गरेको अवस्थामा यो अवस्था दोहो¥याउने गरेको पाइन्छ । अन्य अवस्थामा यो मात्रा कति..